Halkee marayaa shirkii Muqdisho ka socday? - Tilmaan Media
Halkee marayaa shirkii Muqdisho ka socday?
Waxaa maalintii 2 aad shir usocdaa madaxda dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir. shirkaan ayaa waxaa looga arrinsanayaa doorashooyinka lafilayo dalka inay kadhacaan qaabka ay noqon doonaan.
Wararka ayaa sheegaya in dood kataagan tahay qodobada qaar lagu heshiiyay shirkii Dhuusamareeb 3. Dowlad goboleedyada Puntalnd iyo Jubaland ayaa doonaya in qodobada qaar wax laga baddalo.
Sikastaba ha’ahaatee beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed ayaa madaxda shirsan kasugaysa inay heshiis kagaaraan nooca doorasho ee dalka kadhacaysa si looga baaqsado in dalku galo fawdo iyo amni darro dheeraad ah.
Beeralayda jaadka Keenya oo kacabtay joojinta qaadkii ay Soomaaliya gayn jireen
Dad kudhintay qarax miino duleedka magaalada Xudur